Inqubo yocwaningo nokusetshenziswa kwezindaba ze-MBR-Industry-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Inqubo yocwaningo nokusetshenziswa kwe-MBR
Isikhathi: 2020-04-14 Hits: 74
1. Inqubo yokucwaninga ye-MBR
Ngawo-1960, inhlanganisela ye-activated sludge bioreactor kanye ne-cross-flow membrane filtration yabona ukusetshenziswa kwe-MBR ekwelashweni kwamanzi angcolile okokuqala ngqa. Ku-1989, abacwaningi babeka amamojula we-membrane ngaphakathi kwama-bioreactors, beqa inqubekela phambili yama-reactor we-MBR ahlanganisiwe. Kusukela ngama-1990s, ngenxa yokuthuthuka okuqhubekayo kwe-membrane flux, ubuchwepheshe bokulawula ukungcola kwe-membrane nezinto zokwakha ulwelwesi nazo zithuthukiswe kakhulu, izindleko zama-membrane bioreactors ziya ngokuya zehla, futhi le nqubo iye yanakwa kancane kancane. Kusukela ngo-2006, inani eliphelele lama-membrane bioreactors asetshenziswe emhlabeni wonke lifinyelele ezigidini ezingama-US $ 216. Ngokukhulumayo, intuthuko yaseChina iqale emuva kwesikhathi, kepha ukukhula kwayo kuyashesha, futhi izinga lokukhula kwayo lishesha kakhulu kunezinga elijwayelekile lokukhula emhlabeni. Okwamanje isetshenziswa kahle ekwelashweni kwendle okuningi okusebenzayo.
2. Ukusebenza kwe-MBR
(1) Ukusetshenziswa kwe-MBR ekwelashweni kokukhucululwa kwendle emadolobheni
Ngasekupheleni kweminyaka yama-1990s, ngokuvela kwe-MBR ehlanganisiwe, ukusetshenziswa kwama-membrane reactor ekwelashweni kokukhucululwa kwendle kwasedolobheni kuye kwasungulwa ngokushesha. Ukusuka ngonyaka we-2005, amaphrojekthi we-219 we-MBR wokukhucululwa kwendle aseqediwe eNyakatho Melika. Yize iChina yaqala sekwephuzile, ithuthuke ngokushesha. Njengamanje, kunamaphrojekthi amaningi asebenza noma owakhiwa eChina.
(2) Ukusetshenziswa kwe-MBR ekwelashweni kwamanzi amdaka kwezimboni
Uma kuqhathaniswa nokwelashwa kokukhucululwa kwendle okwenziwa emadolobheni, i-MBR inezinzuzo eziningi emkhakheni wezokwelapha wamanzi amdaka wezimboni. Ngokwezibalo, i-MBR njengamanje ibangela ama-41% wokuphathwa kwamanzi amdaka kwezimboni, futhi isetshenziswa kabanzi ekuphrinteni nasekudayweni, ekuphekeni, ekuthambiseni i-electroplating, ekuhlanzeni i-oyili, ekudleni, ku-petrochemicals, kubhiya, kwezokwelapha nase-leachate.
Okwedlule: Izici ze-MBR
Okulandelayo: Ukwethulwa okufushane kwe-membrane bioreactor